Claudi casals | | ခန့်မှန်းချက်
မနေ့က၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ နွေရာသီရာသီကုန်ဆုံးသည်။ နိုင်ငံတော်မိုးလေ ၀ သအေဂျင်စီ Aemet က၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယအပူဆုံးနွေရာသီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းများစတင်ကတည်းက 22 ခုနှစ်တွင်သာတိုင်းပြည်အတွက်အပူနွေးနွေရာသီအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအတွင်းပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၂၅ ºစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့်၊ ဒီနှစ်ပျမ်းမျှအပူချိန်24,7ºCဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အကြားပျမ်းမျှအားဖြင့်ယခင်နွေရာသီထက် ၁.၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာရှိသည်။
သတိပြုရမည်မှာကမ္ဘာကြီးတန်ဖိုးများသည်ကွဲပြားသောဒေသများနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက "အဆင့်သတ်မှတ်ချက်" တွင်ပါဝင်သောနွေရာသီများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌အနွေးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၅ ၏တန်ဖိုးများကိုကျော်လွန်သွားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏အလွန်မြင့်မားသော၊ နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်မည်ဟုမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ သာမန်နွေရာသီထက်ပူနွေးပြီးနောက်၊ ဒီကဆြုံးလွန်းအနွေးဆုံးတစ် ဦး အဖြစ်ပေးအပ်သည်.
ယခုပင်အစမှာ, ၌တည်၏ ဇွန်လသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှအနွေးဆုံးသောလဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းများစတင်ကတည်းကဤလ၏ပျမ်းမျှအပူချိန်3ofC ၏အပူချိန်နှင့်အတူ။ ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လများသည်ပုံမှန်ထက်ပူနွေးကြသည်။ အပူချိန် ၀.၉ နှင့် ၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အသီးသီးသည်အသီးသီးရှိသည်။
နိုင်ငံ၏တောင်ပိုင်းတစ်ဝက်တွင်အပူချိန်မှတ်တမ်းများရှိသည်။ Cordoba လေဆိပ်၏အပူချိန်မှာ ၄၆.၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ ဂရာနာလေဆိပ်ရှိ ၄၅.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (သို့) ၄၄.၄ စင်တီဂရိတ်သည်Jaénတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်မြူနီစီပယ်အများအပြားမှရက်ပေါင်း ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်အပူချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောပြင်းထန်သောအပူလှိုင်းများအပြင်စံချိန်မှတ်တမ်းအချို့လည်းရှိသည်။
သို့သော်၎င်းသည်မိုးရေချိန်တွင် နွေရာသီကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ၏စပိန်ကျော်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန် စတုရန်းမီတာလျှင် ၇၉ လီတာရှိပြီးလက်ရှိပျမ်းမျှနှုန်းထက် ၇% ပိုမိုများပြားသည်.
ဆောင်း ဦး ရာသီသည်စိုထိုင်းသောဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်စဉ်ချိန်ခွင်လျှာတွင်ပျမ်းမျှထက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသည်။ ပြီးတော့ ၀.၅ နဲ့ ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမှာပျမ်းမျှအပူထက်များနေလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ခန့်မှန်းချက် » ဒီနွေရာသီဟာစပိန်မှာဒုတိယအပူဆုံးပဲ
ဥရောပသမဂ္ဂသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်ကိုဆန်းစစ်သည်